SIDEE LOO QALAJIYAA TUFAAXA ISKU-QABSIGA GURIGA? - WIXII MARTIDA
Marka xilli-ciyaareedku uu noqdo mid aad u miro dhal ah, tufaax cusubna ma laha meel lagu xiro, go'aanka badbaadinta ayaa noqon doona miro la qalajiyey.
Marka laga soo tago charlottes, jelly iyo macmacaanada kale, ka dib markii tufaax la qalajiyey si habboon loo diyaarin karaa dhadhan fiican iyo hodan ku ah fitamiinada.
Ma aha noocyada kala duwan ee noocyada tufaaxa ujeedada ujeedadan.
Sidee loo qalajiyaa tufaaxa compote? Bakhaarrada iyo kuwa guriga haya waxay u baahan yihiin inay qaataan xeerar dhowr ah oo fudud oo xisaabta lagu daro furayaasha muhiimka ah ee qalajinta tufaaxa cabitaanka miro. Waxaa ka mid ah talooyin ku saabsan doorashada noocyada ugu wanaagsan, diyaarinta, nadiifinta, hababka gaarka ah iyo meelaha ku haboon ee qalajinta.
Noocyo tufaax ah ayaa ku haboon in lagu qalajiyo qalajinta? Khasaarooyin badan oo khibrad leh ayaa sheeganaya inay ku habboon yihiin miraha la qalajiyey. ku dhowaad noocyo kasta tufaaxa, taas oo la bixinayo in midhaha ay bislaadaan oo aan dhadhanin lahayn.
Si kastaba ha noqotee, ujeedooyin gaar ah, sida kariska wax lagu kariyo, noocyo leh maaddooyin sarreeya oo ah pectins iyo fitamiino ayaa ku habboon, gaar ahaan fitamiin P.
Inta badan inta badan noocyada noocan oo kale ah waa waqooyiga tufaaxa yar-jilicsan, tusaale ahaan, irbado: Dawn, Scalepovka, Macmacaanka, Kisilevka, Tuvinka, Severyanka iyo kuwa kale.
Waxay badanaa ku jiraan qiyaastii 1.5-2.5% ee xayndaabyada P-ah.
Noocyo kale - Vinovka jaalle, Cajiibka Anise, dahabka Chinese iyo Amber - sidoo kale doorasho aad u fiican ee diyaarinta miraha qalalan ee decoction.
Haddii aadan haysan mid ka mid ah noocyada kala duwan, isku day inaad dooratid tufaaxaaga dhadhankaaga - sida ugu fiican ee qorshahan wuxuu noqon doonaa miraha dhadhan macaan oo iftiin leh.
Sidee loo hubiyaa tufaaxa?
Sidee loo hubiyaa in miraha ay ku haboon yihiin cunto karinta khudaarta la qalajiyey? Fiiri wanaagsan si saxaraha tufaaxa inta lagu jiro qalajinta. Haddii aadan walwal lahayn ama si kale loo socodsiin tufaax ka soo horjeeda oksaydhka birta, waxaad ogaan doontaa in tufaaxa tufaaxa lumin doono midab huruud ah. Nooc sax ah ha korin, oo la googooyo ama xayawaan tufaax ah ayaa jilicsan in la taabto iyo wax yar ka dib.
Vitamin P Waxay leedahay saameyn faa'iido leh oo ku saabsan xididada iyo xididdada dhiigga, iyo isku darka ascorbic acid waxay nidaamisaa hababka casriga ah ee jirka. Waa helitaanka fara badan ee fitamiinkan tufaaxa ah ee ka caawin kara diyaargarowga hufnaanta, hodanka ah ee dhadhanka iyo nafaqooyinka.
Sida loo qalajiyo tufaaxa wax lagu karsado guriga? Ha ilaawin, taas oo ku xidhan awooda gurigaaga ama qaabka, waxaad qalajin kartaa tufaax siyaabo kala duwan. Taabashada tufaaxa guriga dhexdiisa waxaa ku jira isticmaalka qolalka raaxada sida balakoonka ama qiiqa.
Haddii aysan suurtagal ahayn in la abuuro xaalado wanaagsan oo ujeeddooyinkan ku jira guriga, markaa wixii intaa ka sii baxaya ayaa qalajinaya tufaaxyada dibadda.
Waxa ugu muhiimsan waa sax qaado xaaladaha cimilada, taas oo tufaaxu aan xumaan lahayn, iyo in la ilaaliyo miraha mustaqbalka ah ee ka yimaada abaarta ee baalallayada iyo cayayaanka iyo cayayaanka kale.
Sidoo kale waxay sameeyeen unugyo badan iyo qalabyo si sahlan loo fududeeyo oo loo dedejiyo cunto karinta. Qodobka "Qallajinta tufaaxa qalabka guryaha," waxaad ka heli kartaa liiska dhamaan noocyada kala duwan qalajinta qalabka, ma aha keliya gaas ama foornada korontada.
Waxa kale oo ku taxan dhammaan faahfaahinta qiimeynaya inta lagu jiro qalajintasidaa darteed miraha la qalajiyey ma aha mid aad u jajaban ama si ka baxsan, adag iyo dhajis.
Xitaa haddii doorashadu ay ku dhacdo tufaax kala duwan oo ku haboon compote, inta lagu guda jiro miro yar oo karkaraya halista 2/3 ee dhammaan fitamiinada.
Si looga hortago tani inay dhacdo, u diyaargaroobi biyo kulul la karkariyey, laakiin marnaba ha ku dhufanin biyo karkaraya.
Habeenkii, miro ayaa la kulmi doonaa biyo, wax yar baa barara, waxayna diyaar u noqon doontaa karinta karinta.
Sida loo qalajiyo tufaaxa qalajiyaha gaarka ahWaxaad ka heli kartaa fiidiyowgaan:
Sidee loo qalajiyaa tufaaxa loogu talagalay jiilaalka? Talaabada koowaad ee diyaarinta miraha la qalajiyey waa diyaarinta tufaax ka hor inta aan la qalajin. Waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya sida ugu fiican ee loo gooyo miraha, laakiin sidoo kale siraha kala duwan si ay u ilaaliyaan midabka iyo alaabada dheer.
Sida nadiifinta tufaaxa, cuntooyinka badankood waxay ku taliyaan ha ka jarin maqaarka oo ka tag tufaaxa pith iyo lafaha. Kama badin doonaan dhadhanka miro-khudradda, laakiin waxay ku dari doonaan oo keliya nafaqooyinka. Diirka ayaa loo yaqaanaa inuu aad u hodan yahay fitamiin C, macdan (macdan, magnesium, potassium, kalsiyum, fosfooraska, iwm), iyo sidoo kale pectins.
Maaha mid aad muhiim u ah meesha iyo waxaad ku qallajiso tufaaxa - on saxanka dubista ee foornada, fuuqbaxa ama kuuska, ku habee jikada.
Waa muhiim dooran qaabka saxda ah, oo ay ugu mahad celineyso dhammaan qaybaha oo si adag ugu dheggan dusha la doortay, waxay si qumman u dhaqi doonaan si dhakhso ah.
Sidaas darteed, haddii aad go'aansato inaad ku karsanto miraha la qalajiyey ee khudradda on a string, ku deldelidda loggia furan, waxaa fiican in la yareeyo miraha dhexdhexaadka ah si siman oo siman. Xooga saar dhumucda 0.5-2 cm.
Ka hor inta aadan qalajin, waxaad isticmaali kartaa saline. Marxaladani waa mid aad u macquul ah haddii aad rabto si loo ilaaliyo miro la jarjaray oo ka soo jeeda midhaha cagaaran iyo cayayaanka kale. Intaa waxaa dheer, miraha la qalajiyey ee loo sameeyay habkan ayaa loo sii hayn doonaa muddo dheer.
Xaalad kasta, taageerada tufaaxa la jarjaray helitaanka hawo cusub oo leh qoyaan dhexdhexaad ah ama hooseeya. Qolka ay tahay midhaha la qalajiyey waa inaan lagu darin urta adag. Haddii kale, miraha la qalajiyey ayaa la burburin doonaa, sida mustaqbalka loo xiri doono.
Sidee loo qalajiyaa tufaaxa loogu talagalay hoyga? Cunto xiiso leh oo lagu qalajiyo tufaaxa foornada leh chips of cherry ee fiidiyowgaan:
Haddii aad dooratay inaad qalalato Noocyo gaar ah oo caan ah tufaaxa, iyo geeddi-socodka qalajinta iyo karkarinta karinta si sax ah loo sameeyo, ka dibna waad helaysaa cabitaanka dabeecada iftiinka - Ma jiro roobab biyeed leh oo aan lahayn midab madow.
Waxyaabaha noocaas ah caawin ee ka hortagga beriberi, hantida daawo guryaha, iyo keliya miiska miisaska qaboobaha.
Ku kaydi miraha qalalan ee tufaaxa, loogu talagalay compote, waa in ay ku hoos jiraan xaalad la mid ah haddii aad la tacaaleysid inta kale ee qalajinta - adigoo si taxadar leh u hawoqonaya, meelo madow iyo qabow.